Ny 13 avy any Toamasina ary 22 avy eto Antananarivo. Tsy nisy sitrana vaovao fa mijanona 101, ary 92 no mbola manaraka fitsaboana. 22 tsy misy soritr’aretina tamin’ireo tranga vaovao, fa ny 13 no misy. Tsy misy ny olona maty. 3968 ny fitiliana vita hatramin’ny 5 mey.
Fitiliana 219 kosa no nahitana ireo olona 35 vaovao, raha ny fanampim-panazavana nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny fahasalamana Pr Solofomalala Gaetan Duval. 2 avy eny Antananarivo Atsimondrano, dia teny Soalandy Ankadivoribe samy vehivavy 34 sy 70 taona. 20 kosa teto Antananarivo Renivohitra, ka 3 Anatihazo Isotry (Lehilahy 2 samy 62 taona sy vehivavy iray 69 taona); Vehivavy iray 27 taona eny Analamahitsy, Zaza 9 teny amin’ny manodidina an’i Mahatony Soavimasoandro sy Alarobia Amboniloha (zazavavy 10 taona miisa 4, vavikely 9 taona, lahikely 12 taona, lahikely 10 taona miisa 3); Vehivavy iray 27 taona teny Tsiadana; Nisy teny Antsobolo Ambatomaro, Izaivola Belanitra, Amboditsiry, Anosisoa Ambohimanarina, Anosizato Antsinanana, ary Ambolokandrina. Mampatahotra ny fiakaran’ny isa, izay midika fa tsy voafehy ny coronavirus eto Madagasikara. Manenika an’Antananarivo sy Toamasina ny valanaretina. Marina fa manao serasera mafy momba ny tambavy ambarany fa mahasoroka sy mahasitrana ny fanjakana, saingy mampanahy ny zava-misy. Fandriana 500 latsaka ny vonona ho an’i Madagasikara, izay tsy haharaka raha mihazakazaka ny fitomboana. Misy fepetra tokony hamboarina sy hatsaraina, raha tsy izany dia mila miomana amin’ny zava-doza kokoa noho izao i Madagasikara. Mety hihamafy ny fepetra toy ny fiverenana amin’ny fihibohana tanteraka, kanefa mila ampifanarahana amin’izany ny fanohanana ara-toekarena sy ara-tsosialy satria efa tena mijaly ny vahoaka. Mampitsangam-bolo ny zava-misy !